Rohamena DMAA (13803-74-2) - Manufacturers Phcoker Chemical
SKU: 13803-74-2 Sokajy: Weight Loss
Rohan 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2) video
Product Name Roahina 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids
Anarana simika 4-methylhexan-2-amine, DMAA, Dimethylamylamin, 1, 3-DMAA, Geranamin, Methylhexaneamin, 3-Dimethylpentylamin, Forthane
Brand Name Forthane, Geranamine
Drug Class Sakafo fanampiny
molekiolan'ny Formula C7H18ClN
molekiolan'ny Wvalo 151.67752
mitsonika Point 120-130 ° C
Freezing Point Tsy misy daty misy
Ny antsasaky ny biolojia Ny DMAA dia manana ny antsasaky ny ora 8.4 raha ampitahaina amin'ny kafeine ora 5.4 ora, ary ny ora mitohy amin'ny ora 0.14 vs ora 0.37 ho an'ny kafeinina.
Solubility Ao anaty rano, 1.5X10 + 4 mg / L amin'ny 25 deg C (est)
Application Ampiasaina ho fampandrosoana na fanatsarana ny hery ara-tsakafo
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2) Description
Ny dite 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) dia amperetamine amphetamine izay nokarohina tamin'ny vokatra ara-panatanjahan-tena sy ny vokatra vokatr'izy ireo, ka ny ankamaroan'izy ireo dia mivarotra sakafo fanampiny. Amin'ny fampandrosoana ny rafi-pitabatabana (CNS) manana rafitra faran'izay haingana, ny DMAA dia mampitombo ny haavon'ny angovo toy ny an'ny kafeinina, fa miasa kosa amin'ny fomba hafa. Na dia tsy misy 100% aza ny fomba fiasa izay nampitomboan'ny DMAA ny angovo, ny ankamaroan'ny mpikaroka dia manaiky fa ny DMAA dia mandrisika ny nadrenalinina (norepinephrine) amin'ny atidoha.
Ny hydrochloride 1.3-dimethyl-pentylamine (DMAA) dia fantatra ihany koa amin'ny methylhexanamine na ny extérieure geranium, na izany aza, ny FDA dia tsy mahafantatra ny siansa azo antoka izay manondro fa ny DMAA dia misy amin'ny zavamaniry. Na dia nankatoavina aza ny DMAA tamin'ny fotoana iray ho fanafody ho an'ny fihanaky ny havokavoka, dia tsy ankatoavina intsony io fampiasana io ary tsy ampiasaina intsony ny fampiasana ara-pahasalamana ny poezia DMAA. Ny DMAA, indrindra amin'ny fampifanarahana amin'ny fitaovana hafa mampitombo, toy ny kafeinina, dia mety ho fahasahiranana ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Ny fanesorana ny tsimok'aretina DMAA dia mety hampiakatra tosidra sy hitarika amin'ny aretim-pihariana avy amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fihenjanana ao anaty tratra mankany amin'ny aretim-po.
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) vovoka (13803-74-2) Mekanisma amin'ny asa
Ny fandinihana momba ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny DMAA ao amin'ny 1940s sy 1950 dia naneho ny fiantraikany ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po izay mampihetsi-po ny asan'ny epinephrine amin'ny neuron sy ny rafi-pitondran'ny rafi-pitabatabana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitomboan'ny tsindrim-bola noho ny fampidiran-drano ny fantson-dra, mihamitombo ny tahan'ny fo noho ny fanentanana kardiac sy ny fitomboan'ny siramamy ao amin'ny rà.
Ny fihetsiketsehana vazoka - ny sifotra ao anaty orona dia mety hitarika amin'ny fihenanam-pandehan'ny rà mandriaka kokoa. Ity dia rafitra ampiasaina amin'ny tsiranoka nasin'ny OTC toy ny oxymetazoline (Afrin) ary tena mahomby. Na izany aza dia nesorina tao an-tsena i Forthane, noho ny fiantraikany lehibe hafa, anisan'izany ny aretina, ny horohorontany, ary ny fitomboan'ny tosidra. Mety mitranga izany satria ny DMAA dia mitovy amin'ny amphetamine ary vokatr'izany, ny fitaovana dia tsy vitan'ny solontenan'ny vazokontika fotsiny fa koa ny rafitra central nerveur (CNS).
soa ny 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2)
Ny DMAA dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tenan'ny fotoana sy ny fihetsiketsehana
Ny DMAA dia manampy amin'ny famonoana matavy
Ny DMAA dia mandrisika ny angovo
Ny DMAA dia afaka manatsara ny fahatsaran'ny vatana
Ny DMAA dia mampitombo ny fahatsapana sy ny fitomboan'ny fifantohana
Ny DMAA dia manatsara ny fahatsapana sy ny fahatsapana ankapobeny
Ny DMAA dia manatsara ny fahaiza-manaony
Mampitombo ny tanjaka ny DMAA, manampy ny fifantohana sy ny antony manosika
soso-kevitra 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2)
Ny doka nomen'ny 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) dia ao amin'ny 10-20mg ary farany dia manomboka amin'ny 40-60mg isan'andro, tsy misy porofo marina ho fanohanana ity diplaoma dosage ity fa toa ny dingan'ny standard dosage ho an'ny hydrochloride supplemental1.3-dimethyl-pentylamine (DMAA) eo amin'ny tsena. Misy fomba sasany ampiasaina:
25mg plus 25mg 30min aorian'ny dose voalohany
50mg miaraka amin'ny sakafo
50mg DMAA vovony menaka plus Cup de Coffee Mavo foana.
Rehefa mampiasa fomba fanao voalohany sy faharoa ianao, dia mety tsy hiova ianao satria kely ny fifantohana.
Rehefa mampiasa ny fomba fahatelo sy fahefatra ianao, ny poezia DMAA dia hanome lanja anao sy hifantohana ary hampiakatra ny fihetseham-ponao. Hahafinaritra ny fahatsapanao. Mazava ho azy, ny fomba fahefatra dia mety ho tsara kokoa satria hahomby kokoa.
Fomba iray hafa dia ny mitondra 25mg ny DMAA poids roa ora aorian'ny nahazoana 50mg. Izany dia fomba ratsy, hahatonga anao hahatsapa ho sahisahy ratsy sy mahazo aretina kely. Misy mpampiasa za-draharaha milaza fa ny dosie DMAA dia tsy tokony hihoatra ny 75mg amin'ny vanim-potoan'ny ora 24, ary tsara indrindra ny tsy maka 75mg amin'ny iray andro.
Side effects ny 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2)
Ny potipotika 1.3-dimethyl-pentylamine (DMAA) dia mety tsy ho azo antoka rehefa alain'ny vava. Koa satria mihevitra ny hiasa toy ny fandeferana, dia miahy ny mety hampitombo ny vintana amin'ny fiantraikany ratsy toy ny:
Ny fahasimban'ny menarana
Ny tahan'ny fo sy ny tsindry
Herisetra amin'ny fo.
Fihetseham-po amin'ny hormonina.
Mifanaraha amin'ny zava-mahadomelina.
Ny fo tsy ara-drariny (ny aretiota fo)
Rao 2-amino-5-methylhexane poids (28292-43-5)
Ny amino-5-methylhexane poopy dia amine aliphatic ampiasaina amin'ny fiomanana ny pyridines sy ny cyclik hafa ...... ..
fahafahana: 1210kg / volana
Rohamena Orlistat (96829-58-2)
Ny vovo Orlistat Rice dia zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fikarakarana ny matavy. Ny asany voalohany dia misakana ny fihenan-tsakafo tsy hihinanan'ny olombelona ....